Sekuyisikhathi eside kwaziwa ukuthi abantu baphumelele nasezimweni ezinzima luqondiswe nakho ngaphambili. Kukhona ngisho izincwadi ekhethekile ezinikeza umqondo ukuhlakanipha nsuku zonke. Kodwa izazi zokusebenza kwengqondo zithi kungcono uzenze ibhulogi.
Namuhla, cishe wonke umuntu angakwazi ukuthola izingcaphuno nemishwana ngendlela ethandwa nguye kulula. Abasebenzisi guided kukhethwa ezahlukahlukene. Abanye abantu bakhetha amazwi ongqondongqondo esikhulu, esikhonza kwashaqisa umhlaba ne imibono yabo ezintsha. Enye indlela enhle yokuziphatha adumile ngemifanekiso noma izinganekwane. inhliziyo Okwesithathu ngaphezulu ukuphuma izincwadi ozithandayo kanye inikeza amafilimu amahle kakhulu. Ezinye linqume okuthile inkhulumomphendvulwano osopolitiki kanye nabantu ibhizinisi.
Ngokuqinisekile, ukuze uqale lokuqoqa imicabango ehlakaniphile nsuku zonke ukuba ngamazwi zefilosofi yamaGreki asendulo. Ngokwesibonelo, wenze sawubona, inkulumo ethi Aristotle. Le ndoda ethile yake yathi: "Le libuse phezu inkanuko - iwukuba uyithumele endaweni efanele." Lokhu lesisho ukhumbuza umuntu ngisho nesifiso ukulimaza umsebenzi, ukuze kuzuze usebenza isandla ezinengqondo.
wathi izinto Brilliant Solon. Lokhu ngesiGreki ngubani wayeyisazi sezombangazwe kanye imbongi, wathi: "Umcebo lwakha ukugcwaliswa, saturation - the ukuchwensa." La mazwi kuyosisiza usuku lonke ukuba baziphathe ngesizotha, kungakhathaliseki isimo sezimali.
Amazwi anokuhlakanipha kungenziwa sisuselwa umsebenzi noyise izinganekwane - Aesop. Imbongi edume wafundisa: "Uma omunye umuntu ukufakazela kunjalo, kungani uchitha amazwi ngeze?". Ngimhlolile lokhu aphorism, umfundi sizokhumbula ukuthi inkhulumomphendvulwano ngezinye izikhathi ongenangqondo kuthatha isikhathi kakhulu kunokuba enze umsebenzi.
izitshalo eziningi ngosuku ingatholakala izingcaphuno of Xenophanes. Isazi sefilosofi wathi: "Ukuze uthole nendoda ehlakaniphileyo futhi udinga hlakanipha." Lokhu ibinzana indoda ithi kuphela ingxoxo indoda efundile ungafunda okuthile okusha. Kodwa ukukhuluma isiwula Uzofunda lutho.
Amazwi anokuhlakanipha ngayinye usuku lwesonto Kufanele kufunwe e imisebenzi ethile eyimfihlakalo nesazi sezibalo Pythagoras. Lokhu sefilosofi waphawula: "Asikho isidingo ukuxosha injabulo, njengoba njalo ihlala phakathi kwethu."
Imisho ukuze Abaphathi
Ungaqala ekuseni aphorisms osopolitiki yimpumelelo. Ikakhulukazi imishwana ezibalulekile kubantu abasebenza zokuphatha, njalo ukubhekana nezinkinga eziyinkimbinkimbi. Ukufakwa abaqavile emphakathini owaziwa ngokuvamile asiza ukwenza izinqumo ezifanele kwezigaba ezihlukahlukene zokuphila.
UMbusi Omkhulu noGayu Yuliy Tsezar, owakwazi yokuhlanganisa izindawo ezinkulu, wathi: "Kungcono ukuba ngowokuqala edolobhaneni kuka ukuba ithathe indawo okwesibili eRoma." Lokhu ibinzana ivumela lokubekwa eqhulwini kodaba lokuvulwa kahle futhi uqaphele indawo yayo.
Amazwi anokuhlakanipha esashiwo ngokuphindaphindiwe edumile engumFulentshi Sharl De Goll. Wake wathi: "Le nqubomgomo kufanele ushaye noma izwe lakhe, noma labavoti. Ngikhetha ukhetho lwesibili. " Lokhu ibinzana kuzosiza nangezindlela ezihlukahlukene kuye, ukuze baqonde ukuthi kumele walwa - ngokuba okuhle ezivamile futhi bajabule abantu ngabanye.
Wakhuluma ngezinyoni ngamandla intatheli yaseMelika futhi umbhali Mark Tven. Wathi: "Phakathi nokubusa imicikilisho ezidingekayo ukuqondiswa nokuziphatha akakwazi ukunaka." Ngamunye ubachazela inkulumo ngendlela yalo.
Ukuze iphephabhuku lady eqinile
Ukuze indlela efanele ukucabanga kuzokusiza izingcaphuno isigamu enhle lwesintu. aphorisms ewusizo ikakhulukazi abesifazane abafuna ukuba bashintshe ukuphila kwabo kube ngcono.
UK Iron Lady, uMargaret Thatcher, uye wakwazi ukuba sihlanganise babantu ababili - sezombusazwe anekhono intokazi ngomusa. Wathi: "Le ndlu ukuba owesifazane Yiqiniso, kumelwe kube maphakathi nezwe, kodwa hhayi komngcele walo."
Ngokushesha sisebenzise umqondo ohlakaniphile. Imisho ebukekayo Merlin Monro futhi wathola udumo olukhulu. Umlingisikazi futhi ubulili uphawu kwenkathi kaningi sisho: "Ngikulungele hayi ukungena ukuphila ezweni run by amadoda ngenkathi they ngivumele ukuba owesifazane."
ithalente okungavamile lokho, engasenathonya nokukhuthazela empilweni kwahluka Koko Shanel. It kungokwalabo zwi kuye: "Azikho abesifazane ugly, kodwa kukhona okuningi ezivilaphayo." Izinga le nkosazana ibhizinisi, yena njalo uthola indlela yakhe, ngakho washo ngokuphindaphindiwe wathi: "Konke kusezandleni zethu. Ngakho-ke, kukhona noma kunjalo angeke ivinjelwe. "
Aphorisms actress emangalisayo
umsebenzi abahlukile lomunye umuntu. Amazwi anokuhlakanipha nsuku kungenziwa sisuselwa umsebenzi okungenakuqhathaniswa Faina Ranevskaya. Lo muntu - iholide, comedy idrama kumuntu oyedwa. izitatimende wakhe kaninginingi baphoqeleka ukuba othi awube abanye. Lo mlingisi wayevame ukuthi: "uNkulunkulu wenza owesifazane omuhle, ukuze akwazi ukuthandana nalo indoda, futhi beyiziphukuphuku ukuthi ukwenza okuthile ukuze uzizwe ubulili namandla".
Yena waba nombono mayelana actress nomshado izibopho. Wayeyisazi movie uthi: "Indlu futhi icindezele zonke izingane womuntu. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba unqume ukuthatha lesi sinyathelo, kubalulekile yokuzihlola. Yini ebaluleke kakhulu kuwe - "bonke" noma "umndeni." Mayelana imizwa inhliziyo Faina wathi lokhu okulandelayo: ". Le ingxenye yesibili ubuchopho, amaphilisi kanye nangaphandle, kanti mina ngazalwa lonke"
actress kungemalengiso ababeyizazi Psychology wobulili obuhlukile. Uyaphawula: "Umuntu ungumuntu njalo esibi. Abanye besifazane abangamaRom babesizakala ungathandi kubo, abanye akuzona kakhulu ezinzima, futhi abanye abakwazi ngisho nokuzitholela lokho. "
Aphorisms lo muntu - okuxubene amahlaya nokuhlakanipha. Bayisibonelo esihle usuku.
Collection isigamu eqinile lesintu
iqoqo lakhe izingcaphuno ingaqoqa futhi amadoda. izingcaphuno yabo kufanele esekelwe ukubhinqa ukukhanya indida. Lifanele ngabo aphorisms humorist abavelele Mikhail Zhvanetskogo. Omunye umculi ethandwa kakhulu imishwana: "Ukuphikisana nesiwula, sicabange ngalo, mhlawumbe akwenzayo into efanayo."
imibono Clever nsuku anganika futhi abantu art. Ngokwesibonelo, ugqozi olukhulu konke ukuphila kuyoba le nkulumo kanje: ". Akuwona wonke aphethe kufanele ukwethembeka, onikeza kuye inja"
Kukhona amazwi kabani abalobi kungaziwa emphakathini. Omunye wabo wathi: "Ungesabi ukuqala ibhizinisi elisha. Umphongolo lakhiwa i amateur. Phezu Titanic ochwepheshe ukusebenza. "
Alberta Eynshteyna kuyinto imishwana esiyingqayizivele. Omunye physics uye waphawula ukuthi kukhona izinto ezimbili kuphela ayipheli - yonke nobuwula, nakuba mayelana wokuqala wayengaqiniseki ukuthi.
Collection wokuboniswa kusuka esikrinini
Ugqozi emsebenzini, amahlaya ezinhle futhi ikani omuhle ngekukhula ozithandayo izinhlamvu ibhayisikobho. ngezinye izikhathi kunengqondo ezingaphezu kuka encwadini yaso izinhlamvu kusuka ochungechungeni TV nama-movie. Imicabango kwabantu abahlakaniphile ukusiza ukuthola isixazululo senkinga eziyinkimbinkimbi. Ngokwesibonelo, omunye izinhlamvu asiwona umdlalo wethelevishini "kanjani I Met Umama Wakho", wathi: "Ungakhathazeki uma abangane bakho ungathandi intombi yakho. Kodwa enyantisayo lapho intandokazi yakho ngeke bawuhloniphe abangane bakho. "
imishwana abaningi ezithakazelisayo namazwi kwelinye izwe ethandwa kakhulu wezokwelapha kakhulu uchungechunge oluthi "Umtholampilo". A uhlamvu kwelinye yesehlakalo zaphawula. "Ngokwazi ukuzethemba kwami uphansi, ngisho noma ucabanga abo, mina nje ukusiza protagonist"
Eyingqayizivele indaba futhi okuqukethwe ifilimu "Revolver". Baningi izingcaphuno nemishwana lokhu waziwa emhlabeni wonke. Kodwa ukuthandwa esikhulu kunazo zonke esitholakala isiqubulo tape: "Ukuze ube ngobuchule, udinga ukudlala nge isitha esihlakaniphile."
Abantu abaningi igunya bayizithombe zabo. Futhi, ngempela, umuntu Usufike udumo jikelele, bayazi ukuthi bafundise abalandeli babo. Qala iviki ukusebenza kungaba umusho actress abanamakhono u-Angelina Jolie: "Uma wenza into othile ufana nje, ngokusuka enhliziyweni, futhi ungalindeli ukubonga, senzo ezilotshwe encwadini ukudalelwa. Bese ukuthumela kini injabulo zazo ungazange ngisho ngaphupha ngakho. " Ngakwelinye ihlangothi, umlingisi Kianu Rivz wathi: "Angikudingi sijabule ukuba baphile nje."
Amazwi anokuhlakanipha nsuku kungaba khona uwedwa futhi amazwi uSteve Imisebenzi. Engineering ubuhlakani wayeqiniseka: "osomabhizinisi abaphumelelayo kusukela losers ababonakali ngezikhundla ukuphikelela kuphela." Ngokuvamile, iziphakamiso kunengqondo ukuthi indoda wathi lapho ekhuluma ababethweswa iziqu emanyuvesi. Kwelinye izinkulumo zakhe wathi: "Okuwukuphela kwendlela ukwenza umsebenzi omkhulu - indaba uthando, engatholakali."
Hlakaniphile Umhlaba Umlobi
Yiqiniso, iningi zonke imishwana ugqozi futhi unike amandla ukuba otholakala ezincwadini ezinhle. Wonke umuntu kumbhali abawuthandayo, ifilosofi okuyinto uyaqonda ngaphandle nobunzima. Namuhla, ezidumile ikakhulukazi owayiloba Brazilian Paulo Coelho. imisebenzi yakhe mikhulu kangakanani e kusakazwa izigidi zamakhophi, kanti ezinye imishwana emisebenzini yakhe eyaziwa emhlabeni wonke. Kuyasiza ukulwa ngempilo yeziyaluyalu ngemva lesisho: "Uma abantu abafisa okuthile, yonke kuzosiza iphupho abe ngokoqobo." Imicabango enjalo abantu esihlakaniphile kosuku ngalunye babe negalelo ilwela injabulo.
Ukudala yomlobi akanamkhawulo ukuze izingcaphuno ezithakazelisayo, uhlobo ugqozi emisebenzini yakhe izothatha ezinyangeni ezimbalwa ngaphambili. Kwenye yezincwadi zakhe, umlobi waphawula ukuthi indlela engcono kakhulu yokuthola okuthile okuthakazelisayo - kulahleka.
Eminye yemisebenzi yakhe - umzekeliso kancane, okungase ikhonze njengomPristi ukufakwa abahlakaniphile ukuqala kosuku olusha.
Dala ibhulogi izingcaphuno, aphorisms namazwi ngeke ulungise wena ku igagasi omuhle, silula. It is, okungenani ngezinye izikhathi ninikele isikhathi lo msebenzi, futhi ezinyangeni ezimbalwa uyoba iqoqo yangasese wokuboniswa ezithakazelisayo.
Qala ukuqoqa amazwi ahlakaniphile abalandelayo kusukela lokusungula ngawo sebekujwayele. Ungakwazi ukubhala umugqa amahle kusukela ingoma namavesi. Kamuva, abantu sebeqala ukwakha imisho yabo. Ukwenza uhlobo enjalo isichazamazwi ezithakazelisayo aphorisms, okuzoba imicabango ehlakaniphile zabantu enkulu ngangokunokwenzeka futhi ekhasini ngendlela yokuxhumana. Ngakho, hhayi kuwe kuphela kodwa futhi nomkhaya wakho ngeke bajwayelane izingcaphuno esiyingqayizivele.
Uma njalo ukuhlehlisa lo msebenzi, khumbula amazwi usomabhizinisi American futhi UMuphi UBill Gates: "Sekwanele ukuba aphile njengombaleki uma prosuschestvuete iminyaka engu-500."
Intentionality - Iyini? Ukuvela umqondo futhi ukubaluleka
Amandla ngenyanga 4 ingane endala: umbuso Ukudla, ukudla okuqinile
"Ngo-Vino Veritas" movie. Womlingisi umqondisi Otar Iosseliani